Vaovao - Vokatra rehetra io, midina hatrany
Vokatra vaovao marobe amin'ity herinandro ity, izay mety ho vaovao aminao ny maro aminy, ka hevitra kely angamba no mety:
Ny paoma mena dia manana nofo matsiro tokoa, ny tsiro dia mampahatsiahy ahy ny paoma masaka tsara indrindra izay nohaninao tamina siramalao maple fotsiny.
Ny paoma Fuji, antsoina koa hoe paoma mena, dia paoma miendrika bolam-bolamena. Mamy toy ny paoma mena ihany izy ireo, misy rindrina somary mahia. Tianay ireo noho ny fitohanana sy ny fanaovana mofo.
Namboly paoma Gala izahay tamin'ny fangatahana tsy tapaka nataon'ny mpanafatra entana any ivelany. Ireto dia karazana paoma kely izay mitovy amin'ny famolavolana jiro boribory manjelanjelatra, tsy misy fanampiana fanampiny, fa misy tsiro be dia be. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fomba mahazatra hanamboarana lovia salady Karaiba, fifangaroan'ny hazo sedera, dipoà, tongolo ary tongolo gasy, izay ampiasaina hanandrana ny zava-drehetra manomboka amin'ny vary sy tsaramaso, na hena, na legioma.
Rehefa avy nandamina ireo tongolika voatahiry rehetra izahay, dia manana tranga vitsivitsy ihany koa ny tongolo mamy kely mitovy habe amin'ny tongolo perila. Ireo dia hatao kofehy tonga lafatra ao anaty sotera ho an'ny kabobs voaendy, alatsaka anaty lasopy, na ampidinina toy ny mpankafy tongolo rehetra.
Izay ny fihintsanan'ny vokatra 'hafahafa' amin'izao fotoana izao. Mbola manana tongolo lay, sakamalao, paoma vaovao ary tongolo be dia be izahay raha izany no tianao, aza misalasala manatona ireo sary momba ny fambolena ao amin'ny tranonkalantsika, ary araho ny rohy etsy ambany www.primeagr.com. [apetraka eto ny sary amin'ny toeram-piompiana]
Fanamarihana farany, mila manangona sy manangona mialoha ny andro faran'izay haingana isika mba hahazoana antoka fa mivoaka avy amin'ny tanimbary vaovao ny legioma hitandrina kalitao tsara. Ho anao izay maniry ny hametraka mialoha ny baiko dia azonao atao ny manampy anay amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny famoahana ny baiko alohaloha kelin'ny mahazatra, ka fantatray izay ilainay ho anao. Tena tia vorona aloha izahay!
Misaotra anao hatrany amin'ny orinasanao, ary mirary herinandro mahafinaritra!